Global Voices teny Malagasy » Chile: Nanafaingana Ny Fitaterana Taova Ny Mpitsabo Mpanampy iray Tamin’ny Alalan’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Avrily 2011 7:15 GMT 1	 · Mpanoratra Elizabeth Rivera Nandika (en) i Stephen Cairns, Candy
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Fahasalamàna, Teknolojia, Voina, Vonjy Voina
Cristina Bizama (@cristi_enf), mpitsabo mpanampy ao amin'ny tobim-pitsaboana Talca  any Chili, dia nahavita nanafaingana ny fitaterana ireo taova hafindra avy any Talca mankany Santiago renivohitra, any amin'ny 260 kilometratra miala avy ao . Izany dia nanomboka tamin'ny Tweet nalefa ny alin'ny 12 Aprily 2011:
Araka ny gazety mpivoaka isanandro amin'ny aterineto El Dinamo  [es] diq niresaka momba ny voq roa, aty iray, ary fo iray izay vonona hafindra amin'olona any an-drenivohitra ilay mpitsabo mpanampy, nefa tsy misy ny fitaovana hanaovana izany tamin'io fotoana io.
@felipezuniga_: Any Talca misy taova dimy vonona hafindra nefa ny Hery an'abakabaka  [es] tsy manana fiaramanidina azo ampiasaina na iray aza raha tsy rahampitso maraina. Ndeha ampahafantarina ny momba izany ny olona.
Rubilar (@karlarubilar) mpikambana ao amin'ny Parlemanta no iray tamin'ireo voalohany namaly ny antso ary nanaraka izany, araka ny hita ato amin'ireto andiana Tweets ireto (1 , 2 , 3 ):
@felipezuniga_  taiza no nahazoanao izany vaovao izany??? Mba ilazao misimisy hoe aho?
@cristi_enf  Inona no ilainareo? Holazaiko ny ministera*
@FelipefromChile  tsara! nantsoiko ny minisitra @allamand ! Amin'izay izy afaka miresaka amin'ny Fach [Hery an'abakabaka Siliana ]
Nankasitraka feno i Luego Felipe Zúñiga (@felipezuniga_ ):
Na izany aza, ilay mpikambana ao amin'ny parlemanta dia nitatitra tamin'ny El Dínamo  [es] fa na ny Ministry ny Fahasalamana (Jaime Mañalich) na ny Ministry ny Fiarovana (Andrés Allamand) dia samy nantsoina, ankoatra ny mpandamina ny fitaterana ny taova raha vantany vao azo ny taova. Nokasain-dry zareo hotaterina ny andro manaraka iny ny taova, na dia mety hiteraka olana eo amin'ny tsy fahazakan'nymarary hamindràna azy aza izany.
Iray tamin'ireo nanao ezaka tamin'ny fitaterana ny taova, ny mpitsabo mpanampin'ny Ministeran'ny Fahasalamana , Felipe Cortés (@FelipefromChile ), nitatitra ny zava-nitranga tao amin'ny Twitter:
@FelipefromChile: @karlarubilar  Miasa ho an'ny MinSal aho [Ministeran'ny Fahasalamana] ary miantso olona mba hahatanteraka izany fitaterana taova izany. Misaotra amin'ny fanohananareo tamin'ny antsonareo aty Talca!
Nitatitra  koa izy:
Farany dia nisy fiaramanidin'ny Hery an'abakabaka  [es] azo nampiasaina, nefa satria tsy nozahan'ny Tobim-pahasalamam-bahoaka [es] ny taova dia tsy azo notanterahina izany sidina izany raha tsy ny ampitson'iny, 13 Aprily tamin'ny 8ora maraina. Nitatitra El Dínamo  [es]: “Manaramaso ny raharaha izahay amin'ity alina ity, anisan'izany ny Ministra Mañalich tenany mihitsy.”
Taorian'izany dia nampahafantarin'i Karla Rubilar , mpikambana ao amin'ny parlemanta (@karlarubilar ) izany tamin'ny Twitter:
Nampiany  fa zava-dehibe ny fanamarinana ny fizotry ny raharaha mba hanamorana ny rafi-panomezana taova tsy dia hisy fahataràna firy:
@DanielCastell  mbola misy olana maro ankoatry ny fitaterana taova. Tokony hisy fanaraha-maso matotra ny zava-drehetra. Tsy tokony hanao asa an-tsirambina ny Transplant Corporation  [es].
Rehefa avy nitatitra ny zava-nitranga i El Dinamo  [es], ny Mpandrindra ny Famatsiana ho an'ny National Transplant Corporation  [es], Diego Buchuk, dia nanazava fa tsy nandray anjara tamin'ny fandaminana izay efa natao tamin'ny fanangonana sy fitaterana ny taova ilay mpitsabo mpanampy nilaza ny olana tamin'ny vahoaka.
Nitatitra ny tantara koa ny tambajotra CNN Chile  [es], ary nilaza fa “fampiasàna tsara ho an'ireo tambajotra sosialy” izany.
Ity tweet avy amin'i Felipe Cortés (@FelipefromChile ) ity no mamintina tsara ny zava-nitranga:
Mba fantatrao ve fa TWEET IRAY dia afaka mamonjy aina? Ndeha hokarakaraina tsara izany fitaovana izany, ry zareo. #Transplant  #OrganDonation 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/04/27/16588/
 tobim-pitsaboana Talca: http://www.hospitaldetalca.cl/
 260 kilometratra miala avy ao: http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=santiago,+santiago,+chile&daddr=Talca,+Chile&hl=en&geocode=FaR5Af4dp9rJ-ykjzGQWBsViljEFgdNH4np5fA%3BFQd-4_0dvpu6-yl90AesosZlljG4yNqv_ldWJg&mra=ls&sll=-33.506763,-70.656853&sspn=0.165464,0.22316&ie=UTF8&t=h&z=9
 Ministeran'ny Fahasalamana: http://www.minsal.cl/portal/url/page/minsalcl/g_nuevo_home/nuevo_home.html
 National Transplant Corporation: http://www.trasplante.cl/